China Island rattan 3-isihlalo sofa Ukwenziwa kunye Factory |Tailong
Island rattan 3-isihlalo sofa
Iseti yesofa yeSiqithi ilula kwaye igcwele intsingiselo.I-PE wicker eyi-1.0 cm ejikelezileyo idityaniswe ne-beige soft cushions, nokuba ibekwe kwiindawo eziphezulu ezifana namachibi okuqubha, iilobi zehotele, okanye igumbi lokuhlala ekhaya, likwashushu kwaye lifumile njengejade.
UBULUMKO & UYAXHUBEKA
Umbala we-rattan othambileyo noshushu
Uxolo kunye nomoya onoxolo wangaphandle
Isofa yeSiqithi enezitulo ezi-3 izisa apha
Ukuthungwa okuphindwe kabini kwembonakalo kunye nemiba ebambekayo
Vumela ikhaya kunye nendalo zidibanise ngokugqibeleleyo
NGAPHANDLE PE RATTAN
I-sofa ye-Island ye-3-seat enezinto ezifudumeleyo kunye nezomeleleyo, ebonisa ukukhanga kwayo okwenyani kwimeko yangaphandle.Ububanzi obuyi-10mm, umbala oxutyiweyo wendalo ongqukuva we-PE wicker, ulukiwe ube ngobuhle, isitayile esibekekileyo.Nokuba ibekwe ngaphakathi, okanye ngaphandle, ngumsebenzi wobugcisa.
Umfanekiso obangel’ umdla nowahlukileyo ubeka i-Island yezihlalo ezi-3 zesofa kwindawo eyodwa, engaqhelekiyo ebalisayo, ezibonakalisa ngokukhululekileyo kwintelekelelo nakwinyani.Isihlalo sesofa inxalenye sebenzisa i-aluminium slat, yomelele ngakumbi kwaye yomelele.
ELIHLE & LUCACA
I-cushions ye-sofa enhle kunye necacileyo kunye ne-wravararound ratio kunye ne-sofa pillows ekhumbuza i-lapels yejacket kunye neekhola eziphakanyisiweyo zifanelekile kwiindawo ezinkulu.Isimbo esiphinda sisebenzise ixesha elidlulileyo, sigxile kwixesha langoku, kwaye yingcamango yoyilo afuna ukuyiveza umyili.
Isofa enye yeSiqithi
Iseti yeSofa yeRattan
* Ukuphumelela uvavanyo lwe-SGS ngo-2020.
Isiboniso seSofa yeSiqithi
Indawo yokufota: Guangzhou, China ixesha lokufota: Julayi.2019
Island rattan isofa enye
Ngaphambili: Emily uxande itafile (Poly-wood)
Okulandelayo: Island rattan coffee table
Isofa enye yaseLisbon
Isofa enye yeRaja aluminiyam